Wasaaradda waxabrashada iyo tacliint sare oo qabatay tababar ku saabsan manhajka xirfadaha kala ah dhismaha wadooyinka, Solar sytem-ka iyo xirida korontada. – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda waxabrashada iyo tacliint sare oo qabatay tababar ku saabsan manhajka xirfadaha kala ah dhismaha wadooyinka, Solar sytem-ka iyo xirida korontada.
By editor	/ January 14, 2018
1/14/ 2018- Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay isugu yeertay xarumaha farsamada gacanta gobolada iyagoo lagu tababarayo manhajka xirfadaha kala ah dhismaha wadooyinka, Solar sytem-ka iyo xirida korontada, tababarkaas oo ahaa kii labaad oo loo qabto shaqaalaha ku shaqada leh ayaa waxaa ku tababarayey macalimiin ka timid dalka aan deriska nahay ee Kenya.
Abshir Maxamuud Aadan oo ka socday hay’ada Care International wuxuu balan qaaday joogteynta tababarada noocaan ah ee lagu kobcinayo aqonta shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha farsamada gacanta ee gudaha Puntland.
Mahad C/qaadir Xuseen oo ah Madaxa Farasamada Gacanta ee Wasaaradda Waxbarshada iyo Taclinta sare oo ka hadlay Daahfurka kulanka ayaa yiri Soomaaliya waxey ka mid tahay dalalka ugu horeeya dunida ee ay shaqo la’aanta ka jirto. Dadkeeda oo boqolkiba 70 in ka badan lagu sheego dhalinyaro ayaa shaqo la’aanta waxey dhaxal-siisay inay tahriibaan, qaarna ay ku biiraan kooxaha xag jirka ah iyo burcad badeedda.
Laakiin waxaa jira dad Soomaaliyeed oo shaqo la’aantaa kaga baxay gacantooda oo ku tiirsan farsamada gacanta oo ay gacantooda Aaminay iyo dalkooda..
waxaa tababarka furay agaasimaha Waaxda Manaahijta, Tayeynta iyo Tayo-dhowrka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare C/qaadir Yuusuf Nuux wuxuuna ka sheekeeyey ahmiyada tababarkaan u leeyahay xirfadlayaasha iyo shaqaalaha xarumaha xirfadaha gacanta, sidoo kale agaasimuhu wuxuu kula dardaarmay shaqaalaha xarumahasi in sida ugu haboon uga fa’idaystaan tababarkan oo socon doona labo maalmood ah.